Fidirana ny kianjan’ny demokrasia Ambohijatovo : voafitaky ny depiote Tim ny Emmo/Reg | NewsMada
Efa niatrana sy mailo amin’ny fotoana rehetra. Tonga maraina teny amin’ny manodidina ny kianjan’ny demokrasia Ambohijatovo ny eo anivon’ny mpitandro filaminana, avy amin’ny Emmo/Reg, omaly. Tonga any am-pototsofin’izy ireo ny hidiran’ny depiote Tim ho etsy amin’io kianja manan-tantara io, saingy tsy henon’ny mpitandro filaminana hatramin’ny farany ny fiovan’ny fandaharam-potoana.
Tsy tanteraka rahateo izany fikasan’ireto mpomba ny filoha teo aloha ireto izany noho ny fifanindrian’ny fotoana, nahatsiarovana ny fahafito taon’ny « Alatsinainy mainty », 26 janoary 2009 teny Tanjombato ka nahemotra ho amin’ny fotoana manaraka. « Mbola hambara eo ihany ny hanaovanay ny tatitra amin’ny vahoaka ny fivorian’ny Antenimierampirenena farany teo… », hoy ny depiote Randrianarisoa Guy Rivo, omaly tetsy Tanjombato.
Miandry ny valin-tenin’ny prefektioran’Antananarivo
Tsiahivina fa mbola any anivon’ny prefektioran’Antananarivo ny fanapahan-kevitry ny filankevitry ny Tanàna, nanafoana ny didy nanakatona io kianja io ny taona 2012. « Tsy tokony hosakanana izahay depiote rehefa eken’ny kaominina ny hampiasanay an’Ambohijatovo », hoy ihany ity depioten’ny Tim ity.
Mazava koa anefa ny an’ny mpitandro filaminana, toy ny efa mahazatra azy fa tsy afaka ny hanaiky ny hetsika rehetra, tsy nahazoana alalana avy amin’ireo ambaratongam-pahefana.